Ny Lalàna: Sexting in Scotland | Ny valin'ny Fanamarinana
Home Lalàna Miforitra eo ambanin'ny lalànan'i Scotland
Ny "sexting" dia tsy fehezanteny ara-dalàna. Ny sexting dia “mamokatra samirery”Tamin'ny telefaona no tena nanatanterahana azy. Amin'izao fotoana izao, ny fitondran-tena "sexting" amin'ny karazany isan-karazany any Ekosy dia azo enjehina araka ny lalàna iray ary olana sarotra. Ireo fizarana misy lalàna etsy ambony no tena mety ampiasain'ny mpampanoa lalàna. Na inona na inona antsointsika hoe, ny sexting dia hetsika lehibe iraisan'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Satria tsy manaiky hanao na handefa sary ny zaza iray, dia tsy manome azy io ho ara-dalàna. Ny heloka bevava amin'ny alàlan'ny cyber dia iray amin'ny sehatry ny heloka bevava haingana indrindra ankehitriny.
Ny fanitsakitsahana ny fidirana dia ny fidirana amin'ny fomba fitondra miaraka amin'ny finiavana miteraka tahotra sy fanairana. Ny rehetra na ny ampahany amin'io fitondran-tena io dia mety amin'ny alàlan'ny telefaona finday na mampiasa tranonkala media sosialy sy famoahana fitaovana momba an'io olona io.ary miha mahazo vahana amin'ny ankizy izany. Tsy resaka fijerena olona fotsiny akory izany.
Ny Mpitondra antsika, Mary Sharpe, dia mpikambana ao amin'ny Faculty of Advocates ary an'ny College of Justice. Miaina ny lalàna momba ny heloka bevava amin'ny lafiny roa tonta ary manohana. Mary Sharpe dia eo amin'ny lisitrasa tsy manao fampiharana nefa izy kosa tafiditra amin'ny fiantrana. Faly izy miresaka amin'ny ray aman-dreny, sekoly sy fikambanana hafa amin'ny ankapobeny momba ny fiantraikan'ny borosy miaraka amin'ny lalàna manodidina ny firaisana ara-nofo mifandraika amin'ny pôrnôgrafia. Tsy afaka hanome toro-hevitra ara-dalàna izy amin'ny tranga manokana.
Ny lalàna mifehy ny heloka bevava any Skotlandia dia hafa noho ny lalàna any Angletera sy Wales ary Irlandy Avaratra. Jereo ity lahatsoratra momba ny toe-javatra misy eo pejy eo amboniny. Ireo manamboninahitra lalàna dia mandray an-tanana ny fitarainana ataon'ny mpikaroka sy ny mpanao gazety hoe "sexting" toy ny heloka bevava mety hitranga. Ataon'izy ireo manokana. Ny zaza latsaky ny 16 taona dia hatolotra ny Rafitra fihainoana ny ankizy. Raha misy ny fandikan-dalàna mahery setra toy ny fanolanana, ny ankizy tsy ampy taona 16 taona dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny rafi-pitsaràna amin'ny heloka bevava ao amin'ny Fitsarana Avo.
Raha voaheloka ho nanao firaisana ara-nofo dia be ny fehezanteny. Hampiditra fampandrenesana ny fisoratana anarana momba ny firaisana ara-nofo ho an'ny 16 ireo taona ary mihoatra ny noporofoina tamin'ny alàlan'ny fitsarana heloka bevava.
Ho an'ny ankizy latsaky ny 16 taona, ny fandikan-dalàna momba ny lahy sy ny vavy dia horaisina ho toy ny "faharesen-dahatra" ho an'ny tanjon'ny lalàna fanarenana ny mpandika lalàna 1974 na dia tsy nantsoina toy izany aza tao amin'ny Rafitra fihainoana ny ankizy. Midika izany fa takiana amin'ny famoahana izany fandikan-dalàna izany amin'ny antontan-taratasy ofisialy izy ireo raha te hiara-hiasa amin'ireo vondrona marefo anisan'izany ny ankizy. Io takiana io dia maharitra 7 taona sy tapany manomboka amin'ny datin'ny "faharesen-dahatra" raha latsaky ny 18 taona, ary mandritra ny 15 taona raha mihoatra ny 18 taona.
Ny fiantraikany azo ampiharina amin'ny fanitsakitsahana ara-nofo amin'ny asa, fiainana sosialy ary fitsangatsanganana ho an'ny olona iray ambany ary mihoatra ny 16 dia misy dikany kely ary tsy dia fantatra loatra. Ny fepetra takiana amin'ny fampahafantarana fandikan-dalàna kely mandritra ny fahazazana dia ho jerena amin'ny lafiny sasany ao Volavolan-dalàna momba ny fanambaràna (Skotlandy) mandalo ny parlemanta Scottish ankehitriny. Ny tolo-kevitra dia ny tsy famoahana ho azy ireo mpampiasa azy ny faharesen-dahatra amin'ny fahazazana ary ho afaka hizaha tsy miankina amin'ny alàlan'ny Fitsarana Sheriff. Ity fomba fanao farany ity dia azo inoana fa ho an'ny tenany ihany.
Rehefa mihamalalaka ny fanararaotana an-tserasera sy fanenjehana ara-nofo dia manao paikady haingana kokoa ny mpitondra fanjakana. Ny mpampianatra, ny ray aman-dreny ary ny zanaka dia mila mampahafantatra amin'ny tenany ireo risika. Mety ho henjehina ihany koa ireo biby manala sary maloto azony tamin'ny hafa.
Ny Reward Foundation dia mamolavola drafitra lesona ho an'ny sekoly momba ny lalàna amin'ity sehatra ity. Raha mahaliana anao ianao, azafady miangavy anao amin'ny tomponandraikitra ambony ao amin'ny mary@rewardfoundation.org raha mila fanazavana fanampiny.
<< Sexting Fampandrenesana fe-potoana ambanin'ny lalàna anglisy, Wales & NI >>